China Galvanized Angle သံမဏိစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
အမျိုးအစား- သံမဏိ ပရိုဖိုင် Tags: A135-A, A179-C, A213-T11, A315-B, A333-7.9, A334-8, A335-P9, A53, သွပ်ရည်စိမ် ချန်နယ်သံမဏိ, Galvanized flat steel, Galvanized H-beam သံမဏိ၊ Galvanized I-beam သံမဏိ၊ Galvanized square သံမဏိ
နိဒါန်း သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ထောင့်သံမဏိကို ပူပူနွေးနွေး သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိနှင့် အအေးခံထားသော သွပ်ရည်စိမ်ထောင့်သံမဏိဟူ၍ ပိုင်းခြားထားသည်။Hot-dip galvanized angle steel ကို hot-dip galvanized angle steel သို့မဟုတ် hot-dip galvanized angle steel ဟုခေါ်သည်။အအေးမိသောသွပ်ရည်သုတ်သည့်ဆေးသည် ဇင့်မှုန့်နှင့်သံမဏိတို့ကြား လုံလောက်သောထိတွေ့မှုသေချာစေရန် လျှပ်စစ်ဓာတုမူများကို အဓိကအသုံးပြုပြီး သံချေးတက်ခြင်းအတွက် electrode ဖြစ်နိုင်ချေကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။လုပ်ငန်းစဉ် အမျိုးအစားခွဲခြင်းအရ ၎င်းကို hot-dip galvanized angle steel နှင့် cold-dip galvanized angle steel ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။Hot-dip galvanized angle steel သည် ဈေးကွက်တွင် အသုံးများသည်။Cold-galvanized angle steel သည် ယေဘူယျအားဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်အရ အအေးခံရန် လိုအပ်သည်။ဘေးဘက်အလျားအရ ၎င်းကို သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ညီမျှသောထောင့်သံမဏိနှင့် သွပ်ရည်စိမ်မညီမျှသောထောင့်သံမဏိအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်သည်။1. ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်း 2. တာရှည်ခံပြီး တာရှည်ခံမှု 3. ကောင်းမွန်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- 4. အပေါ်ယံပိုင်း၏ ခိုင်ခံ့မာကျောမှု 5. ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှု 6. အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လုပ်သားသက်သာစေခြင်း
ပစ္စည်း A53၊ A283-D၊ A135-A၊ A53-A၊ A106-A၊ A179-C၊ A214-C၊ A192၊ A226၊ A315-B၊ A53-B၊ A106-B၊ A178-C၊ A210-A- 1၊ A210-C၊ A333-1.6၊ A333-7.9၊ A333-3.4၊ A333-8၊ A334-8၊ A335-P1၊ A369-FP1၊ A250-T1၊ A209-T1၊ A335-P2၊ A369-FP၊ A199-T11၊ A213-T11၊ A335-P22၊ A369-FP22၊ A199-T22၊ A213-T22၊ A213-T5၊ A335-P9၊ A369-FP9၊ A199-T9၊ A213-T9 စသဖြင့်
တူညီသောအစွန်း: 20*20mm-200*200mm, သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို
မညီမျှသောအစွန်း- 45*30mm-200*125mm, သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို
အထူ: 2mm-24mm, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို
အရှည်- 5.8m၊ 6m၊ 11.8m၊ 12m သို့မဟုတ် အခြားအရှည်များ လိုအပ်သည်
လျှောက်လွှာ Galvanized Angle သံမဏိအား လျှပ်စစ်တာဝါတိုင်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ၊ နံရံကပ်ကာတွန်းပစ္စည်းများ၊ စင်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ မီးရထားလမ်းများ၊ အဝေးပြေးလမ်းများကာကွယ်ရေး၊ လမ်းမီးတိုင်များ၊ သင်္ဘောအစိတ်အပိုင်းများ၊ အဆောက်အဦစတီးလ်တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊
နောက်တစ်ခု: သွပ်ရည်စိမ်ထားသော ချန်နယ်သံမဏိ
Angle Bar Stainless Steel
Galvanized Angle သံမဏိ
Galvanized Angle သံမဏိစက်ရုံ